တရုတ်ရေအောက်စုပ်ယူစက်နှင့်ထုတ်လုပ်သူများ - Depump နည်းပညာ
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > နစ်မြုပ် Slurry Pump
SS စီးရီးအောက်ရှိရေပူစုပ်စက်ကိုသတ္တုတွင်း၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ သတ္တု၊ ကျောက်မီးသွေး၊ ဥပမာအားဖြင့်သတ္တုဓာတ်ကြွယ်ဝသောဓာတ်သတ္တုထုတ်လုပ်ခြင်းတွင်ဓာတ်သတ္တုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ အပူစွမ်းအင်စက်ရုံတွင်ဟိုက်ဒရောလစ်ပြာများဖယ်ရှားခြင်း၊ ကျောက်မီးသွေးပြင်ဆင်မှုစက်ရုံတွင်ကျောက်မီးသွေးသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်သိပ်သည်းသောအလတ်စားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ မြစ်ချောင်းများသောင်တင်ခြင်း၊ ကြည်လင်င်အချို့တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီး slurry ။
လက်ရှိအချိန်တွင် ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းသောသဘာ ၀ ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းများသည်သတ္တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်း၏တွင်းထွက်စက်ရုံများတွင်အသုံးပြုသည်။ သတ္တုရိုင်းမူလတန်းခွဲခြင်း၏အလုပ်အခြေအနေမကောင်းသောကြောင့်ဤအပိုင်းရှိ slurry pump ၏သက်တမ်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့်နည်းသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ကွဲပြားခြားနားသောသတ္တုရိုင်းကွဲပြားခြားနားသောပွန်းစားခြင်းရှိသည်။
MSS submersible slurry pump သည်ဟိုက်ဒရောလစ်စက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးမော်တာတစ်ခုနှင့်ရေစုပ်စက်ကိုသမုဒ္ဒရာထဲသို့နစ်မြုပ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မှလှုံ့ဆော်ပေးသောရေမြှုပ်စုပ်စက်ကို ၀ ယ်ရန်ကြိုဆိုပါသည်။
နစ်မြုပ်သောတူးဖော်ခြင်း Slurry Pump
သတ္တုတွင်း၊ သတ္ထုတူးဖော်ရေး၊ စွမ်းအင်၊ ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၊ မြစ်တူးခြင်း၊ သဲချခြင်း၊ မြူနီစီပယ်အင်ဂျင်နီယာနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများစသည့်ပွန်းပဲ့စေသောအမှုန်များပါ ၀ င်သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်သင့်တော်သည်။ ထုတ်ကုန်ကိုတပ်ဆင်ရန်နှင့်ရွှေ့ရန်လွယ်ကူသည်၊ မြင့်မားသောပါးလွှာသောထုတ်ယူနိုင်စွမ်းရှိပြီးကြာရှည်စွာကြမ်းတမ်းသောအခြေအနေများတွင်လုံခြုံစွာလည်ပတ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ရိုးရာဒေါင်လိုက်ရေစုပ်စက်နှင့်ရေငုပ်ခြင်းစုပ်စက်ကိုအစားထိုးရန်အတွက်အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။
Agitator ခုတ်နှင့်အတူသဲတူးဖော်ခြင်းများအတွက် Centrifugal လျှပ်စစ်ဟိုက်ဒရောလစ် Submersible Slurry Pump ကျောက်စရစ် Pump သဲ Pump ရွှံ့စုပ်။ ငါတို့ထံမှလျှပ်စစ်ရေငုပ်လွယ်သောစုပ်စက်ကို ၀ ယ်ယူရန်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။
ဟိုက်ဒရောလစ် Submersible Slurry Pump
ငါတို့ထံမှဟိုက်ဒရောလစ် submersible slurry pump ကိုဝယ်ယူရန်ကြိုဆိုပါသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းများထုတ်ယူခြင်းရေအောက်သဘာ ၀ ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းဟိုက်ဒရောလစ်စွမ်းအင်သဲလောင်စာစွမ်းအင်သုံးသဘာဓာတ်ငွေ့သဲတွင်းတူးစက်ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာပန့်တူးဖော်စက်သဲပန့်သည် Agitator Cutter နှင့်အတူ
Centrifugal Electric Submersible Slurry Pump သဲပန့်အကွာအဝေးဒေါင်လိုက်ရေစုပ်ဖိအားမြင့်ဖိအားနှစ်မြှုပ်နိုင်သောသဲပန့်
သငျသညျငါတို့ထံမှရေမြှုပ်သဲကျောက်စရစ် pump ကိုဝယ်ခြင်းငှါစိတ်ချပါငြိမ်ဝပ်စွာနေနိုင်ပါတယ်။
ငါတို့ထံမှဟိုက်ဒရောလစ် submersible သဲစုတ်ယူခြင်းစုပ်စက်ကိုဝယ်ခြင်းငှါကြိုဆိုပါသည်။
ရွှံ့နွံအမှုန့်သဲအစိုင်အခဲ slush effluent ဒေါင်လိုက် Submersible ဟိုက်ဒရောလစ်တူးစက်တရုတ်တရုတ်ဟိုက်ဒရောလစ်သတ္တုတွင်းများအတွက်သဲ Submersible slurry pump
စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော နစ်မြုပ် Slurry Pump ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သောအနိမ့်ဈေးနှင့်စျေးပေါသောစျေးနှုန်းဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ Depump Technology သည်တရုတ်ပြည်၏ကျော်ကြားသော နစ်မြုပ် Slurry Pump ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်များရှိပြီးအမြောက်အများထုပ်ပိုးပါသည်။ ကျွန်ုပ်မှာယူမှုကိုယခုမှာယူလျှင်၊ သင်၌၎င်းမှာရှိပါသလား။ ဟုတ်ပါတယ်! လိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးနှုန်းစာရင်းသာမကဈေးနှုန်းများလည်းပါ ၀ င်မည်ဖြစ်သည်။ ငါလက်ကားရောင်းချင်ရင်မင်းငါ့ကိုဘယ်စျေးနှုန်းပေးမှာလဲ? သင်၏လက်ကားအရေအတွက်များလွန်းပါကစက်ရုံစျေးနှုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးပေါ်အရောင်းရဆုံး၊ အဆင့်မြင့်၊ လျှော့စျေးနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့လာရောက်ရန်သင့်ကိုကြိုဆိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှလျှော့စျေးထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်ယူရန်စိတ်ချနိုင်ပါသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူပူးပေါင်းမျှော်လင့်, သင်ပိုမိုသိလိုလျှင်, သင်ယခုကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်, ငါတို့အချိန်မီသင်ပြန်ကြားမည်!